The Rohingya News Bank : NVC
Showing posts with label NVC. Show all posts
Rohingya Citizenship: Myanmar’s NUG to draft new charter to ensure it
Inasignificant development, Myanmar's National Unity Government has announced draftinganew constitution and committed to ensuring citizenship and fundamental rights of all ethnic groups, including the Rohingyas.
It also pledged to repatriate Rohingyas from Bangladesh and other neighbouring countries, revoke the controversial 1982 Citizenship Law and National Verification Card, and invite them to join the shadow government in overthrowing the military junta.
"We invite Rohingyas to join hands with us and with others to participate in this Spring Revolution against military dictatorship in all possible ways," saidastatement by the National Unity Government (NUG) Thursday.
The NUG, Myanmar's shadow government in exile, was formed by the ousted parliamentarians of National League of Democracy (NLD) in early April, more than two months after the military took control of the Southeast Asian country, alleging gross anomalies in the November 2020 elections. The NLD had won the election and was in the process of formingagovernment.
Labels: 1982 Citizenship law, 2021, en, Nay San Lwin, News, NLD, NUG, NVC, Rohingya, Tun Khin
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်ပြန်လက်ခံရေး ထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ရှိ
၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို စစ်တကောင်းက ရေလယ်ကျွန်း ဘာဆန်ချားကို စစ်သင်္ဘောနဲ့ ပို့ဖို့ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလကုန်က ပြင်ဆင်နေစဉ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရောက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေကို ပြန်လည်လက် ခံရေး မှာ ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ပြောဆိုချက်ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး ဖို့ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးချမ်းအေးက ဘီဘီစီကို ပြောပါ တယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ တရုတ်၊ သုံးပွင့်ဆိုင် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2021, mm, NVC, ပြန်လည်လက်ခံရေး, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ထွက်ပေါက်မရှိ(ဝါ) ထွက်ပြေးရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက်အပြုံ လိုက် ထောင်ချခံရ
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မရှိဘဲ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက် ပြေးရန် မှောင်ခိုလူကုန်ကူးသူများကိုသာ အားကိုးနေကြရာ လမ်းခရီးတွင် အဖမ်းခံကြရပြီး ထောင်ချခံနေ ကြရသည်။
ရဲမွန်၊ အိမ့်သက်ဆုနှင့် ဘန်ဒူးနန့်တို့ ရေးသားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အဖမ်းခံရပေမဲ့ မလေးရှားကိုသွားဖို့ ကြိုးစားချင်သေးတယ်” ဟု ကိုတူးအောင်ကပြောသည်။ သူသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားသဖြင့် ၂၀၁၇ တွင် အဖမ်းခံရသော ရိုဟင်ဂျာဖြစ်သည်။
Labels: 2020, mm, NVC, နိုင်ငံမဲ့, မလေးရှား, ရိုဟင်ဂျာ, လူကုန်ကူးမှု, ဆောင်းပါး
NVC ကိုင်ဆောင်သူတွေကို စိစစ်ပြီး ၆ လ အတွင်း နိုင်ငံ သားပေးမည်
NVC နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကို စိစစ်ပြီး ၆ လအတွင်း နိုင်ငံသားဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆွစ် ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမှာ အောက်တိုဘာလ ၇ - ၁၁ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပနေတဲ့ အကြိမ် (၇၀) မြောက် UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် နေတဲ့ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ကနေ ဒုက္ခသည်တွေ ဌာနေပြန်ရေး အဓိကဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ကိစ္စ အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တာပါ။ မအင်ကြင်းနိုင်က အသေးစိတ်ကို ဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါ။
Labels: 2019, mm, NVC, UNHCR, ဂျီနီဗာမြို့, နိုင်ငံသား, သတင်း, ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး
ရိုဟင်ဂျာတွေ NVC မလိုဘူးလို့ BHRN ခေါင်းဆောင် ပြောကြား
ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုမြှင့်တင်ရေး ညီလာခံကို တက်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ လူ့အခွင့်အရေးကွန်ရက် အမှုဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဝင်း ကို လက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာအခြေအနေေ တွနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ရုံးချုပ်မှာ RFA အဖွဲ့သား ဦးခင်မောင်စိုးက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
Labels: 2019, BHRN, mm, NVC, RFA Burmese, Video, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, ဦးကျော်ဝင်း, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
Labels: 2018, mm, NVC, ဦးကျော်မင်း, ဆောင်းပါး